Iwo akanakisa mwenje uye nekukurumidza kugoverwa kweLinux, unozviziva zvese? | Linux Vakapindwa muropa
Kutsvaga a Yakareruka Linux? GNU / Linux-based masisitimu anonyanya kuita zvakasiyana. Isu takaona GNU / Linux yakaiswa pamafoni emafoni uye zvakare kune makuru makomputa. Hapana chinoshora ichi chinotakurika uye chinoshanda kwese-kutenderera. Muchikamu chino tichaita muunganidzwa we iyo yakanakisa isina kuremerwa Linux kugoverwa kune yakaderera-zviwanikwa kana zvekare makomputa.
Imi mose muchayeuka nhau nezve yeRussia (Dmitry) uyo aikwanisa kubhodhi iyo Ubuntu neLinux kernel 2.6.34 mu muchina une 8-bit processor. Iyi ndiyo kesi yakanyanyisa kuzivikanwa kusvika parinhasi, kutyora rekodhi rezvishoma zviwanikwa. Muchokwadi, iyo sisitimu yaakashandisa yaive Atmega1284p microcontroller uye neARM emulator iyo yaakanyora pachezvake kubata 32-bit software pane 8-bit chip.
Mhedzisiro yacho yaive iyo Ubuntu yaida maawa maviri kubhucha mumavara modhi uye maawa mana kuti ubate mu graphical mode neiyi 6,5Mhz chip uye chete masere masere esizi saizi. Asi pakupedzisira zvakatanga, chinova chinhu chinonakidza pamusoro penyaya. Ukayedza izvozvo neWindows kana neMac OS X kana mamwe masisitimu anoshanda, ungangofa uchiedza. Izvo zvinoratidza kugona kweLinux kuchinjira kune chero ...
Kana isu hatifanirwe kuenda kune idzi dzakanyanya kesi, iyo inozivikanwa uye yakabudirira Raspberry Pi iwe wakaderera pane zviwanikwa uye zvakadaro iwe unogona kumhanya akasiyana Linux kugoverwa kweARM. Uye vimba neni, zvinozviita mushe mushe. Iwe unogona here kufungidzira mhedzisiro yeinonyanya kudzvanya sisitimu yekushandisa pane Raspberry Pi?
Chokwadi iwe haudi kumirira maawa mana kuti utange yako distro, asi pamwe unayo makomputa ane zviwanikwa zvishoma kana zvekarePamwe iyo 80486 kana yekare Am386 kana iwe wakangotenga komputa yakachipa uye neyechinyakare distro inononoka. Kana iwe uchida kuziva ndeipi linux yekuisa iyo inoshandisa mashoma zviwanikwa pano irori runyorwa.
8 Nongedzera Linux
11 Crunch Bang (#!)
13 Arch Linux neimwe lightweith DE
Kuita kuti ishande Anti-X iwe unongoda Pentium II uye 64MB ye RAM, kunyangwe 128MB inokurudzirwa. Ndokusaka inogona kuiswa mumidziyo kubva kunopera ma90s pasina dambudziko. Mufananidzo wako unokwanisa kurodha pasi uye uri pasi pe700MB muhukuru, saka unogona kupisirwa CD kuti riiswe.
Zvinosanganisira akawanda mashoma mapakeji pre-yakaiswa, senge LibreOffice, MPLayer, Iceweasel lightweight browser, Claws mail mutengi. Iyo desktop yemamiriro ekunze yakavakirwa paGNOME uye yakanyorwa muC ++ mutauro, iri IceWM.
SparkyLinux iri kugoverwa kwakavakirwa paDebian. Inosanganisira nharaunda dzedesktop dzakadai seRazor-QT, LXDE, OpenBox / JWM, e17 neMATE, dzakasiyana siyana kusarudza nzvimbo yaunofarira. SparckLinux yakanyatsogadzirwa kuti ishande pamakomputa ekare aine zvishandiso zvishoma zvemidziyo, izvo zvisingatadzise kuve neakanaka uye akazara mashandiro.
Iwe unongoda 256MB ye RAM yeLXDE, OpenBox kana e17, idzi dzinokwira kusvika ku384MB kana ukasarudza Razor-QT. Chero zvazvingaitika, inogona kushanda neyekare 32-bit processor, sePentium III kana yakafanana, uye chete 5GB yemahara hard disk space inodiwa.
Pindai mapakeji acho aisanganisira kune LibreOffice, GIMP, PlayOnLinux, DropBox, Teamviewer, QMMP uye VLC, inozoiswa nekumisikidza. Uye kunyangwe iwe uine yakazara giraidhi yekudzidza kuishandisa, haisi nyore kupatsanura.
Puppy Linux ndeimwe yezvandinoda. Puppy kugovera kwakagadzirirwa kushandisa zviwanikwa zvishoma. Iyo ine inonakidza mashandisiro, ine akati wandei mwenje desktop desktop (LXDE, JWM, IceWM), zviri nyore, zvakakwana, unogona kubhuroka kubva pendrive kana kuiisa pane hard disk. Iyo yepamutemo webhusaiti ine hombe Wiki yekubvunza kusahadzika kana kugadzirisa matambudziko.
Inotakurika, mufananidzo wako unongorema nezve 100MB uye inowanikwa muLiveCD kana LiveUSB vhezheni. Inoshandisa ndangariro diki kwazvo, zvekuti neOpenOffice yakavhura haizodariki 256MB RAM inogarwa. Kana zviri izvo zvinodiwa, ine 64MB chete inogona kubhowa, kunyangwe iwe uchigona kutarisira 512MB yenzvimbo yemahara kuti ugadzirewo chikamu cheSAPAP. Iyo 486 processor inogona kukwana.
Nenzira, kune vhezheni yePuppy Linux Lucid yakavakirwa paUbuntu uye imwe Sacko Puppy yakavakirwa paSlackware. Mafilosofi maviri akasiyana kuti iwe usarudze iyo yaunonzwa kugadzikana mairi. Chii chimwe pane zvinonzi "zvimbwanana"ndiko kuti, kugoverwa kunoenderana nePuppy ine zvinangwa zvakafanana, kumhanya, kugadzikana, otomatiki kutsvaga kwehardware uye nhamba yezvirongwa zviripo munzvimbo diki.
Iyo yazvino vhezheni yakaburitswa nechirongwa iyi yaive Puppy 6.3 munaNovember 2015, kubvira ipapo hapana nhau mune izvi ...
Lubuntu ndiyo inoparadzirwa kupfuura dzose iyi iUbuntu ine lightweight LXDE desktop nharaunda yemakomputa ane mashoma zviwanikwa. Kuve yepamutemo distro, kuvandudza kwayo uye kugadzirisa kunoenderana neUbuntu. Inogona kushanda pamakomputa ane madiki RAM, echinyakare machipisi, uye pane yakaderera-kugona akaomarara madhiraivha. Kana iwe uine Laptop, Lubuntu zvakare ichave sarudzo yekufunga.
Mukuwedzera, the software inouya pre-yakaiswa zvakare yakasarudzika kushandisa zviwanikwa zvishoma. Imwe bhenefiti inharaunda huru iri kuseri kweUbuntu, saka hauzoshaya rutsigiro, kugadzirisa, nezvimwe.
Icho chakareruka kupfuura Xubuntu, ine zvakaderera zvakanyanya zvinodiwa. Izvo zviwanikwa zvinodikanwa kumhanyisa Lubuntu zvine Pentium II kana Pentium III CPU (AMD K6-II, K6-III kana K7) ine frequency ye400Mhz uye RAM ndangariro yeinenge 192 MB.
Ndiye mukoma waLubuntu, vese zviri pamutemo vanozivikanwa neCanonical, zvakare iri Ubuntu ine yakajeka desktop desktop, asi panguva ino Xubuntu ine Xfce nharaunda. Kana iwe uine timu ine mashoma zviwanikwa kana uchida kuve nehurongwa hwakareruka uye nekukurumidza sezvinobvira, iri sarudzo huru Xubuntu inogutsikana ne800Mhz chete ye processor, 384MB ye RAM uye hard drive ingangoita 4GB.
Elementary OS yakanaka, inokurumidza uye yakajeka distro. Inogona kutorwa pasi kune ese makumi maviri nemasere nemakumi matanhatu nematatu. Iyo yakavakirwa paUbuntu uye Pantheon desktop nharaunda, yakabva kuGNOME. Kunyangwe Elementary OS isiri yekushandisa zvakanyanya, haina kukurudzirwa kumakomputa akura zvakanyanya kana ane mashoma zviwanikwa. Zvakaipisisa, kana iwe uine yakawanda yemazuva ano asi yakaderera-zviwanikwa netbook kana laptop, Elementary inogona kumhanya zvakanaka.
ari zvinodikanwa zvishoma yeElementary OS haina kunyanyisa, asi haisi iwo akadzika zvakanyanya kana. Iwe unoda processor yeinenge 1Ghz x86 kana yepamusoro, 512 MB ye RAM, 5GB ye hard disk space, kadhi yemifananidzo inokwanisa kudzora resolution ye 1024x768px uye CD / DVD kana USB drive yekumisikidza.
Perar OS yakafanana neElementary OS mune dzimwe nzira. Iko kugovera kunoedza kutevedzera Mac OS X, uye kunyangwe zvave kumira kuvapo, unogona kuwana maseva pane network iyo yavanogona kurodha pasi. Kutsiva kwePear OS kwakaunzwa, kunozivikanwa seClementine OS, iyi yakagumiswawo, asi sekune Pear OS, iwe unowanawo nzvimbo dzisiri pamutemo kuti dzibudise.
Kana iwe uine Indaneti, zvinozoita kuti basa rako rive nyore, asi kana usina, harisi zvakakosha zvinodiwa. Iwe unongoda processor yeinenge 700Mhz uye 32 bits, 512MB ye RAM, 8GB ye hard disk, giraidhi kadhi inokwanisa kubata nesarudzo ye1024x768px, uye CD / DVD kana USB muverengi wekumisikidza.
Kubva paDebian 7 uye iyo MATE desktop nharaunda, Point Linux inorema kugovera uye zvidiki zvinogona kuiswa pamakomputa zviine mashoma zviwanikwa. Inopa chinongedzo nemamamerica mamenyu uye inogadzirwa neboka revagadziri vanobva kuRussia. Vashandisi veiyi distro vanozokwanisa kunakirwa nyore, kugona uye kugadzikana. Mufananidzo wacho unongotora 1GB yenzvimbo uye unowanikwa kune ese makumi maviri nematanhatu nematatu
Izvo zvidiki zvinodiwa ndeizvi: kuva ne ingangoita 1Ghz processor, une 512MB ye RAM, 5GB yemahara hard disk, uye kadhi yemifananidzo inokwanisa kugadzirisa zvisarudzo zve1024x768px.
Iyo inotakurika sisitimu uye, Porteus, pakutanga ainzi Slax Remix. Iko shanduko yakanaka kana iwe uchida chaiyo yakajeka inoshanda sisitimu iyo isingatore chinotora mazana 300MB yenzvimbo. Zvichienderana nezvamunoda, unogona kusarudza pakati penzvimbo dzakasiyana dzemifananidzo, senge KDE, Razor, LXDE, MATE, uye XFCE. Kana iwe uchida kumhanyisa kumhanyisa, ini ndinokurudzira XFCE kana LXDE ...
Kana uchizoenda bhuti mune zvinyorwa mode, ine 32-bit processor uye 40MB ye RAM inokwana. Kana iwe uchida kuitangisa mu graphic mode, iyo X system inokukumbira iwe ingangoita 256MB ye RAM, chimwe chinhu chiri nyore kuwana kunyange pamakomputa kubva kuma90s.
Nehurombo, kubvira 2014 (Porteus 3.1) hatina kumwe kumwe kuvhurwa nevagadziri veiyi distro. Nekudaro, iwe unogona kudhawunirodha iyo ISOs dzeshanduro dzakapfuura.
Manjaro iri nyowani nyowani isina kureruka Linux kugovera, Yakavakirwa paArch Linux asi ine hushamwari interface yekuisa. Izvo zvinoita kuti zvinhu zvive nyore, avo vanoziva iyo Arch Linux kuisirwa vanozoiziva ... Unogona kuikanda mumatanho matatu epamutemo uye unogona zvakare kusarudza pakati penzvimbo yedesktop ine OpenBox kana XFCE, ese ari maviri akajeka. Iko kugovera kukuru, kwakanaka, kuri nyore uye kwakazara kwazvo. Haisi iyo inoda zvishoma zviwanikwa, asi inogona kuve yakanaka yepakati imwe nzira pakati peimwe inorema uye yakareruka mamodheru.
Crunch Bang (#!)
Iyi distro ine iri zita risinganzwisisike sisitimu yakanaka yezvikwata zvechiedza. Yakanyanya kugadzirisa neOpenBox. CrunchBang yakasimba uye yakachengeteka, ichipa chiitiko chakanaka maererano nekushandisa. Nekuve neiyi minimalist giraidhi system, inogona kumhanyisa pamakomputa ekare kana zviine mashoma zviwanikwa.
crunchbang yakavakirwa paDebian uye inowanikwa kuti utore mumifananidzo makumi matatu nematanhatu nemapfumbamwe Iyo yose ISO inotora chete 32MB uye mairi iwe unowana iyo system uye mapakeji akaiswamo mairi. Iwe unongoda chete komputa ine 64Mhz processor kana yakakwira, 800MB ye RAM, kadhi yemifananidzo inoenderana ne600 × 256 resolution, 800GB yenzvimbo yemahara pane hard disk uye USB port kana CD / DVD drive yekumisikidza.
Kubva 2013 chirongwa ichi chakasiiwa, apo mugadziri wayo anotungamira paakapedza basa rake ndokurisiya mumaoko enharaunda. Nekudaro, madota eprojekiti akaenderera pasi pezita rekuti CrunchBang ++ (Plus Plus) uye Bunsenlabs. https://www.bunsenlabs.org/
Sezvinoreva zita rayo, TinyCore idiki distro nenzvimbo inoyevedza yakajeka. Iko kugoverwa kwemodular, ndokuti, inoshandisa Linux kernel uye zvinowedzera zvakagadzirwa nharaunda. Uye zvakare, inosiya iyo sarudzo yemifananidzo yakajeka kuti isarudzwe nemushandisi. Chinhu chikuru chinokanganisa ndechekuti TinyCore haisi yea newbies, iine imwe yakaoma kuisirwa kwevatangi.
Mushandisi achave nezere kutonga nezve maficha akaisirwa uye Hardware iyo yatinoda kuve nerutsigiro. Iyo yekumisikidza haigone kusvika 10MB, saka zviri nyore kutakura chero SD, USB ndangariro kana CD. Chinhu chakakanganisika ndechekuti inosanganisira zvisingaite mapakeji: hapana mabhurawuza, hapana masutu ehofisi, ... Asi kana iwe uri mukuru muLinux nyika, iwe uchaifarira ayo akajairika zvachose graphical interface, kumhanya kwayo uye kushanduka. Kana ndichifanirwa kutaura TinyCore neizwi rimwe chete, izvo zvingave "zvinogadziriswa".
TinyCore zvinodiwa zvinoderedzwa kusvika processor 486DX uye 32MB ye RAM. Pasina kupokana imwe yeakanyanya kushomeka uye akareruka.
Arch Linux neimwe lightweith DE
Arch Linux ingangove imwe yemasimba ekuparadzira Linux, asi imwe yeakanyanya kuomarara kushandisa. Naizvozvo, haina kukodzera kune vanotanga, asi kunetseka kwayo kunopa kushanduka kukuru uye simba iro vazhinji vashandisi vemberi vari kutsvaga.
SaArch Linux inouya yakagadziridzwa kwazvo, saka hauzotambisa zviwanikwa sevamwe. Uye zvakare, inouya neyakavakirwa, iwe unogona kuigadzirisa kune yako zvaunoda, sekuisa isina huremu desktop desktop. Iwe une sarudzo pakati penzvimbo dzakasiyana uye maneja emahwindo asingaremi: Pantheon, MATE, i3, OpenBox, LxQt, ...
Kugovera kweSpanish kunobva kunzvimbo dzeGalician, Trisquel, ine Mini vhezheni iri yakapfava kupfuura mukoma wayo mukuru. Iyo 100% yemahara distro seTrisquel, chete Trisquel Mini ndiyo yakanyatsogadziriswa kune yekare kana zvishoma zvigadzirwa zvine hunyanzvi.
Iyo inoshandisa Ubuntu Linux sehwaro uye se LXDE desktop nharaunda default. Uye zvakare, iwe unogona kuwana mamwe mafomu anoshandisa mashoma zviwanikwa ezuva rako zuva nezuva senge AbiWord, MPlayer, Midori, nezvimwe.
Peppermint OS Icho chimwe chakareruka kugovera kunoenderana neLubuntu, ndiko kuti, Ubuntu Linux ine LXDE nharaunda. Kunze kwekuchengeta mupfungwa kureruka uye kugadzirisa kwemakomputa ane mashoma zviwanikwa kana mashoma mashandisiro, ivo vanogadzira vanga vachizivawo gore.
Naizvozvo, kana iwe uine komputa ine diki Hardware, ine 192MB ye RAM, uye iwe zvakare unofarira Lubuntu asi iwe unoda kugona kwakanangana ne Cloud Computing, iyi ndiyo sarudzo yakanakira iwe.
Linux Lite ndeyekureruka kugovera uko kunobva paUbuntu LTS. Iwe unotoziva kuti maLong Term Support mahanduro ane rutsigiro rwakawedzerwa kwemakore mashanu, saka runovimbisa kugadzikana uye kugadziridzwa kwenguva refu.
Musiki waro ndiye Jerry bezencon, iyo inobva kuNew Zealand inotitorera iyi distro. Jerry akafunga kuti iyo sisitimu inofanirwa kunge iine hushamwari sezvinobvira nemushandisi asina ruzivo, saka zviri nyore kushandisa. Ehe usingakanganwe kuderedzwa kwekushandisa zviwanikwa pamwe neXFCE nharaunda.
Bodhi Linux ndeyekureruka kweLinux kugovera kunoenderana neUbuntu LTS uye neMoksha Desktop. Dhizaini yaro uzivi ndeyekupa yakaderera base yevashandisi kupedzisa kuisirwa nesoftware yavanoda, pasina kuwedzera asiri-akakosha mapakeji ayo anogona kukodza iyo distro.
Moksha Desktop Iyo inouya kubva kuna Jeff Hoogland, mushambadzi mukuru weBodhi, paakaneta neChiedza mune vhezheni 18. Saka akafunga kugadzira forogo yeE17, iyo yaizosanganisira mashandiro matsva uye maficha aingove aripo mune dzimwe shanduro dzapashure.
Usakanganwa kusiya zvaunotaura. Chii chinonzi distro yako Yakareruka Linux kufarira? Pamusoro peizvi pane mamwe akaita saVector Linux, Slitaz, LXLE, Absolute Linux, MX Linux, Macpup, nezvimwe, izvo zvisina kuenderera mberi nekuvandudzika kwavo asi unogona kushanyira nzvimbo dzinoenderana dzepamutemo kurodha mifananidzo yezvazvino shanduro ...
Kana komputa yako iine simba rekusiya, ita shuwa yekuisa izvi Kugoverwa kweLinux yakakurudzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Lightweight Linux kugoverwa
Ini ndinonyatsoshandisa xubuntu mune diki, zvinorwadza kuti mac haisisipo, vaiita kunge wapos
Andres Mejía akadaro
Ehezve iwe hauna kukanganisa, tsvaga MintOsx Iyo Distribution Yakavakirwa paLinux Mint Ine Graphical Nzvimbo Yakanyanya Kufanana neMac OSx Uye Kwakanyanya Kurumidza ndinoikurudzira.
Pindura Andres Mejia
Matias Olivera akadaro
Muunganidzwa wakanaka, kunyangwe ichifanira kutaurwa kuti kune maviri akamiswa kugovera: Pear OS, uye CruchBang (#!)
Crunchbang #! haisisipo asi iri kutsiviwa naCrunchbang ++ (plus plus)
kunyangwe iri muchikamu che beta.
Mubvunzo wekutanga: Ini handigone kumisikidza chero Debian distro kubva kuUSb, chete kubva ku cd's ndeye chimwe chinhu kunyanya? Kwaziso
Pindura kuna MaxiF
Ndiri kuishandisa (Crunchbang ++) uye ini handina kuifarira, iyo yekutanga irinani, zvinosuwisa kuti haisati yatove mukubudirira. PaManjaro, tsanangura kuti ndeye 64 bits. Ini ndakadzora mufananidzo uye kwaive kutambisa nguva.
Pindura kuna JoseV
Mhoroi apo! Unoziva? Ini ndakaisa kubva kuSimplice USB inova Debian 8 isina kugadzikana based distro. Asi zvinofamba zvakanaka sei! Kunyangwe, ndichitenderedza zvishoma neiyo interface uye mapakeji, ini ndakakanda pasi iyo «desktop» (nharaunda) iyo yakatounza yakanaka openbox yakanyatso rongedzwa kunze kwekureruka uye zvakare, yakanaka kwazvo! Ipapo .. mune zvinyorwa zvemhando yemhando… Sudo apt-tora kuisa gnome-shell… 3.18 inounza! Kuedza..! Uye ini ndiri kushamisika kwazvo kukurumidza kwandinoita kabhuku kangu kadiki Ini ndichiri kukwanisa kuzvitenda! Elementary yaikambaira, Xubuntu anga akati kwirei futi ... ndakafunga kuti dambudziko raive * ubuntus .. asi neUbuntu 15.04 yaive yakanyatsotsetseka .. uye ikozvino neDebian iyi inomhanya chaizvo! Bhuku rangu rekunyora: AMD C70 4GB RAM 250GB SSD.
Jorge RH akadaro
yakanaka kwazvo distros uye ini handina kusarudzwa kuti ndosarudza ipi.
Pindura Jorge RH
Iwe unoita shanduko mune iyo menyu yeBIOS kupa pekutanga kuUSB?
PointLinux zvachose !!
Pamberi peizvi ini ndaizosarudza emmabuntüs, ndiri kuenda ndichatarisa PointLinux ...
Ini ndoda kurairwa uye zano, nekuti ini ndoda kumisikidza akati wandei linux pamaPC ekare, ndanga ndisingade kuisa iyo mbwanana linux husiku, asi zvave zvisingaite kuiisa, handisi kuwana mapeji kwavanokuraira pamusoro zvipi zvekushandisa zvavanazvo uye maitiro ekuisa. (Kana paine mapeji mazhinji, mazhinji acho muChirungu, uye ... iwo maratidziro ezvinosanganiswa nelinux zvauri kutora ... Ini ndiri mudiki kwazvo uye kunyangwe ndikaverenga zvakadii handikwanise kuwana chero chinhu. Ndeipi linux yaunondipa zano? Chero foramu iyo inokutendera kuti unyore (haufanirwe kuprinta gwaro, kusaina uye kuitumira kune mutungamiriri / maneja) iri muchiSpanish. Ndotenda zvikuru
Pindura kuna heidy
Leonard Acevedo akadaro
Heidy! Ndeapi matambudziko ako chaiwo ekugadzirisa, nekuti kana iwe usinga zive kugovera kupi kwaunosarudza, unofanirwa kudoma kuti ndeipi PC kana kabhuku kaunofanirwa kuona iyo chaiyo. ….
Pindura kuna Leonardo Acevedo
Tarisa uone yangu post h *** s: //www.taringa.net/posts/linux/19931409/Linux-bajos-recursos-para-netbook-del-Gobierno.html
Ndiro bhuku rekupedzisira pane light distro iro randakaita uye kana uchifarira, tarisa kune vamwe, riedze nemaitiro akasiyana nemidziyo.
PS: hachisi chinangwa changu kuita spam, uye kana admin akafunga nezvazvo, anogona kudzima mhinduro yangu, ndeye chete yekuziva ruzivo
YENRRY Rafael akadaro
Iko zvakare kune iyo Android system yepc inorema 220 mb CREO
Pindura YENRRY RAFAEL
Kana iyo distro ichidya zvinopfuura 64MB ye RAM haina kukodzera kumakomputa ekare uye mazhinji eaya runyorwa akadaro. LibreOffice inoshandisa zviwanikwa zvakawandisa, MS Office 2003 inoshandisa zvakanyanya kushoma pane iine 64MB chete mugondohwe yakanaka, saka zvakafanira kutsiva LibreOffice neAbiword uye zvimwe zvirongwa zvinotsiva iro hofisi suite iyo inodya zvishoma zvishoma zviwanikwa. Mazhinji Windows 95 / 98SE / Me maPC ane 32, 64 uye 128MB ye RAM. Vamwe vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nemashanu uye vakaita rombo rakanaka 256GB uye vekupedzisira vanenge vaigara vachiunza Windows XP kubva kufekitori.
Iine 526MB mu RAM, Windows Legacy yeFoundamentals maPC anogona kutomhanyisa MS Office 2003, dock senge RocketDock, dingindira rakanakisa saAlienware Invader, mhedzisiro mhedzisiro neCursor XP FX uye nemaneja desktop desktop saDeskSpace. O Dexpot, inotsigirawo mvura inonaya uye nekusarudzwa kwezvirongwa zvakakodzera kubva pakati pa1995 na2003, uye mashoma akasarudzika kubva muna 2015, iwe unotova nePC inoshanda, inokurumidza uye inoyerera inotaridzika chaizvo uye yaunogona kushanda nayo zuva nezuva nezve chero chinhu.
Iceweasel haisi lightweight browser, ndeye FireFox dombo uye inoshandisa zvakafanana neiyi, pamushini une isingasviki 526MB mu RAM unenge uri kuuraya iyo neiyo browser uye zvimwe kana iwe ukaizadza nemaAddons, kana uchitova 1GB mu RAM yatove inonzwa kunetesa kuvhura anopfuura gumi tabu pamushini wekare zvisinei nehurongwa hwekushandisa. Iwe unoda bhurawuza sechiedza seK-Meleon kana yakafanana, iyo yaunogona kuishandisa mune chete 10MB yegondohwe kana zvishoma.
Pamushini pandakayedza Elementary OS yakatarisana nayo neWindows Fundamentals yeLeacy PCs, ndakahwina neWLLP yekuwisira pasi mukuita uye kuti iyo WFLP yakanga yatotakurwa nezvirongwa uye Elementary OS mune nyowani yekumisikidza. Elementary OS haina kugadzirwa kutsiva Windows XP asi Windows 7 mune chero mamiriro ezvinhu, inoda angangoita 1GB mugondohwe.
Iwo chete ma distros ari eakare maPC ndeaya: KolibriOS, TinyCore, Vector Linux (mwenje), damn diki linux, archlinux, uye debian ine lxqt desktop.
Mamwe ma distros ataurwa pano aingotsiva Windows XP uye Windows 7 / 8.1 / 10 kana muridzi wePC iyoyo akaisa mapurogiramu anorema anovaita kamba. Semuenzaniso inorema uye inoparadza antivirus iyo inoshandisa zvese zviwanikwa zvePC.
Mhinduro yakanaka kwazvo, zvingave zvakanaka chete kujekesa kuti KolibriOs haisi linux distro kana yepedyo, iri rakazvimiririra, rakazvimirira chirongwa. Inogona kuyedzwa pamhepo sezvo paine nzvimbo dzavanoteedzera uye ipapo ini ndaona mashandiro ayo, asi kutendeseka inongova chirongwa chakaganhurirwa, kana ichienzaniswa nezvikumbiro zvemahara zvakanyorerwa Linux. Kwaziso.
Pindura ku hivitro
Rafael Linux Mushandisi akadaro
Ndakaedza kumisikidza akasiyana siyana (mamwe ataurwa pano) pane VERY OLD malaptop uko zvisingaite kuisa OpenSUSE. Iwo makomputa aive neWindows 95 (uye 64MB ye RAM), uye vangangoita vaviri chete vakakwanisa kutanga nekushanda pasina rimwezve dambudziko nekuparadzirwa kwe "mwenje" miviri:
- Chidhoma kana "kugadzirisa" kwePuppy Linux inonzi "Bobby Linux" muchiSpanish kubva kuchiratidziro chekutanga, asi izvo hazvichashandiswazve Ikozvino pane yakafanana vhezheni yePuppy zvakare multilanguage: http://shino.pos.to/linux/wary/
- Zenwalk yanga ichifamba zvakanaka asi vafunga kuti vanongoburitsa 64bit shanduro :(
Ini handina kukwanisa bhuti ne Android x86 mune chero chazvo, zvinonyadzisa.
Pindura kuna Rafael Linux Mushandisi
Mhoro, mumwe mubvunzo, chii chaunokurudzira kuti asus eee pc 4g (4GB disk, 512MB RAM, xp sp1 kubva muna 2002).
Ini ndinoda kuti ifambe (YT, facebook), vlc media player kana zvakafanana uye ndiine libreoffice, kuti ini ndasara ne500MB / 1GB.
Ndakaedza iyo crunchbang asi haina app tsigiro saka inova yakaoma uye ubuntu inorema uye inononoka.
Ini ndinofunga chakanakisa chingave chinjana cheLinux, asi pakushandisa ikoko, chii chaunokurudzira?
Chinhu chakanakisa chingave chekuti iwe ushandise lubuntu, nekuti nekukanganisa iyo yako pc, ndinofunga ingave sarudzo yakanaka. Iwe unogona zvakare kutarisa KolibriOS
Isa linux mint 13 pane asus eee pc ine 1g gondohwe ine 500g HDD uye 1.5g processor uye inomhanya zvakanaka pane aus eee pc seasheall .. edza kuwedzera HDD neRam kusvika pa1g, inomhanya zvakanaka uye inomhanyisa mapurogiramu aunokumbira. ..
Pindura kuna orman
Asus eee pc ine yayo yakagadziriswa linux vhezheni. Ndakanga ndiine CD rekutanga ravakandipa, ndakaripa nekuti handina kana rimwe randakambowana. Bodhi, Lubuntu, JoliOS, eeebuntu….
Pindura kuna josevegacastro2015
Kubva pane zvakaitika kwandiri Puppy ichave iri kuita nemazvo chaizvo. Ndanga ndichiishandisa kwemakore pane Pentium III uye inoshanda kwazvo. Unogona kubvunza blog muSpanish inonzi "todo puppy linux". Kumbundira!
AntiX haina kuvandudzwa kubvira 2013 uye pakupedzisira, haina kushanda pane yekare laptop iyo yakamhanya Windows 95. Zvinonyadzisa.
Hapana wongororo yeZorin distro? Ndine PC ine 1 Gb ye RAM uye 1.6 GHz AMD Sempron, ini ndakanga ndakurudzirwa iyoyo.
Pane chero munhu akaedza kuchinja RAM mumalaptop avo ekare? Mazhinji eayo ekare michina anowedzerwa kusvika 1 GB kana 2 GB uye izvo zvaizogadzirisa matambudziko ataurwa. Zvakare, aya marudzi e RAM anowanikwa uye anodhura. Ipapo chero isingaremi Linux distro inogona kuiswa.
Anodiwa, ndinomanikidza nekusahadzika kwangu: 1 Gb RAM, AMD Sempron 1.6 GHz, ine Win XP. Mukadzi wangu anoishandisa paInternet (tsamba neFacebook) asi ini handina kumbobata Linux, chii chakandinakira? Zorin inoshanda here? Ini ndichaonga maitiro.
Ernesto, ine iyo gadziriso, kunyangwe imwe yazvino vhezheni yeLinux inokukodzera iwe (OpenSUSE, semuenzaniso). Dambudziko nderekuti ivo vachazomira kuburitsa vhezheni ye32-bit processor, saka rairo yangu ndeye KUEDZA chero ipi inoita senge yakakodzera, nekuti hapana chinoitika kuyedza. HAUSATI uchizoparadza PC nekuisa imwe uye imwe kusvikira wawana yaunoda zvakanyanya. Zvine musoro, iyo windows nharaunda kazhinji ndiyo inoita mutsauko kana zvasvika pakushanda, saka unogona kuyedza Elementary, Fedora, Ubuntu, Linux Mint…. nekuti yega yega inoshandisa akasiyana nzvimbo yekutengesa. OpenSUSE inounza anopfuura matatu kusarudza kubva nekumisikidza kumwe chete, saka kana iwe uchida kuchengetedza nguva, ini ndaizoisa OpenSUSE.
Ndatenda Rafael, ndichaona kuti zvinopera sei.
Ernesto, kana vakakurudzira Zorin, Iishandise, ini parizvino ndinoishandisa uye inoshanda nemazvo… ini handina matambudziko nekugadzirisa uye zvese zvinoshanda nemazvo….
Ndine PC mbiri mbiri uye ine 2 GB yeRamu pasina matambudziko ..
Ernesto. Ndine zorin yakaiswa pane simbi ine iwo maratidziro uye inoshanda mushe. Elementary yako freya yaive yakanaka uye inorema zvishoma, zvirinani ndakazvinzwa nenzira iyoyo, ndakasarudza kuyedza lubuntu, fedora ne lxde, q4os asi iyo inokwana yakanakisa yaive zorin os9 iri kuita mushe uye lubuntu zvakafanana. Zvakare, zviri nyore kuenda kubva kuhwina kune linux neaya ma distros. Chekutanga ndaive ndaisa win 7 asi ini ndaisazvida chero chinhu chaidziirwa uye ne lubuntu kana zorin zvirinani. Pakupedzisira ini ndinokurudzira zorin 9.
Pindura kuna juanjo
zvinonakidza !! Ini ndaigara ndichizvitarisa nekutarisa distro iyoyo zvekare asi handina kumboiisa. Nguva dzose neElementary kana Ubuntu .. ndinofanira kubvuma kuti Elementary, pane yangu AMD C70 inononoka kwazvo! Ndakaedza kuremadza zvinhu, asi kwete! Inorema kwazvo mushure menguva pfupi. Zvinoshamisa asi ini ndakacherekedza kuwanda kweUbuntu 15.04 (yakandipa yakanakisa Ubuntu ruzivo). Ndiri parizvino paDebian 8 uye nokutendeseka, yakahwina! Inokurumidza uye yakasimba.
Ini ndinotaura kuti hazvina kukodzera kuwedzera gondohwe kune pc, kune echizvino distros anoita mushe, tarisa pamusoro apo pandinoisa ruzivo nezvazvo
Juan Caio akadaro
Yakanaka kwazvo inonakidza distros yandaisaziva !!, Ndatenda zvikuru kune iyo info !!
Pindura Juan Caio
savupiippu Velez akadaro
Ini ndinoshandisa zvakatsetseka linux pamushini une pentium D uye 1 Gb mugondohwe uye ndinogona kumhanya maviri emapeji anodya yakawanda yegondohwe. Kunge CastleVille uye Youtube panguva imwe chete ndiri kuita zvakanaka. Uye neaya akavhurika, inosvika 2% gondohwe uye 85% chinjana ne15Gb
Pindura kuna Komin Velez
Raphael Borges akadaro
Yakanakisa pane ese ndiLubuntu, yakajeka uye inoshanda
Pindura kuna Rafael Borges
Lopez juanjo akadaro
Ernesto. Ndine zorin yakaiswa pane simbi ine iwo maratidziro uye inoshanda mushe. Elementary iwe freya izvo do.justa uye a. Zvishoma zvinorema, zvirinani ndainzwa nenzira iyoyo, ndakasarudza kuyedza lubuntu, fedora ne lxde, q4os asi iyo inokwana zvakanakisa yaive zorin os9 iri kuita mushe. Izvo zvakare zvakareruka kuenda kubva kuhwina kune linux neiyo distro.
Pindura kuna juanjo lopez
Ndiri kutya kukuudza kwete, mune izvo zviri nani Antix kana Sparky linux
Manheru akanaka mudikani!
Ndiri munhau idzi nekuti ndine netbook ine Intel atom 1.66mhz x2 uye 1gb ram. Ndiri kuda kuisa linux kuti ndidzidze zvakawanda nezve iyi OS uye zvakare kuti ikurumidze kupfuura iyo windows 7 iyo yazvino yavakaisa kubvira ne1gb yegondohwe ndinonzwa kuti inofamba kana ichishanda pazvishandiso.
Ndinovimba rubatsiro rwako!
Isa arch linux, kwandiri ndiyo yakanakira yakaderera-zviwanikwa makomputa.
Ndine Acer Aspire One D260, Intel Atom N450 1,66 Ghz, ine 512 cache uye 1Gb yekumusoro. Ndakaedza akati wandei (Mint xfce, pupy, crunchbang, lxle, lubuntu, nezvimwe, nezvimwewo ... zvekutanga (ndakaiyedza kwemwedzi, yakatanga zvakanaka ikazononoka) .Zvino ini ndine LINUX LITE, zvakandishamisa, inomhanya chaizvo.Iwe unofanirwa kuedza kusvikira wawana zvinoshanda kwauri.
tarisa pambiru yangu nezve linux pahurumende netbook, zvinokushamisa iwe
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ini ndakaisa iyo Ubuntu 14.04 ndichiziva kuti ndeye linux distro asi ndisingazive kuti timu iri kuenda zvakare kudhonza kana ichishanda uye zvakanaka, izvo zvakaitika! Zvisinei, ndinoda kubatsirwa neiyi hehe.
Ndakaedza linux mint xfce, uye yaidya shoma yegondohwe ndangariro kupfuura lubuntu, iri yekuti yekupedzisira inoshandisa yakareruka desktop
Ndatenda kwazvo azpe, Walter uye shaggi nemhinduro dzenyu. Ini ndichaedza madistros akandidaidza. Kwaziwai vadikani.
Iyo distro yakadaro haina basa zvakanyanya asi grafiki nharaunda. Kune zvishandiso zvekare unogona kushandisa distro inouya muCD fomati uye sarudza LXDE, XFCE, OpenBox, Enlightenment. Kana iyo distro ikauya paDVD, irase sezvazvinouya nemaraibhurari mazhinji, plugins uye software izvo zvisingashande zvakanaka pamushini wako.
Mhoro! Ndiri newbie kana zvasvika kuLinux.
Ini ndoda kutama kubva windows uye ndinokumbira iwe rubatsiro kuti usarudze kuti ndeipi distro inonyanya kukurudzirwa pakombuta iyi:
Ini ndaizeza neUbuntu kana Linux Mint (Ndakaverenga kuti ndivo vanokurudzirwa kwazvo kune avo vedu vari kutanga) asi ini handizive kana rangu bhuku rebhuku rinoenderana navo.
Ndatenda zvikuru nerubatsiro rwenyu!
Ini pachangu, uye semushandisi weLinux wandine ini pachangu uye nehunyanzvi kuyedza zvakakomba uye kugadzikana, ndinokurudzira OpenSUSE. Ingozama uye wozofunga. Ichokwadi kuti kune mamwe akawanda Ubuntu uye maforivhi ekuwana, asi kugadzikana kweOpenSUSE ndinokuvimbisa kuti kwakanaka. Kana iwe uchizoishandisa chete kufamba uye kutamba multimedia, ipapo chero mwenje uchaita.
Ehezve, kurudziro yangu ndeyekuti iwe isa kana 2GB kana iwe uchida KDE desktop kana uchafanirwa kusarudza iri nyore desktop senge LXQt, Budgie, XFCE,…. asi izvo zvatova sarudzo yemunhu
Pano iwe unofanirwa kusarudza uye kuyedza Live shanduro: https://geckolinux.github.io/
Asi kana iwe pakupedzisira ukafunga nezve OpenSUSE, gadza kubva kuzere DVD vhezheni uye wosarudza iyo desktop yekushandisa).
Ndinovimba unova mumwezve chameleon;)
Kutenda nerubatsiro Rafael!
Mhoro Carmen, tarisa ndinoshandisa Huayra Linux v3.1. Iko mashandiro emakomputa senge iyo yauinayo yakanaka kwazvo uye iyo desktop desktop yainoshandisa ndeye MATE. Unogona kuzviedza muLIVE mode kana uchida.
Ini ndakakanganwa kuwedzera kuti iwe unogona kutoita YEMAHARA SIMULATION yekuti yega yega "vhezheni" inoshanda sei (chaizvo iiyo yakafanana vhezheni yeOpenSUSE ine akasiyana desktops) nekudzvanya pa "Test drive" (semuenzaniso http://node76.susestudio.com/testdrive/start/kJgfWEq4cJH7tC3tmgOP?lang=en ) uye hautombofanirodha kana kurekodha chero chinhu. Edza iyo online !!! Zvinoshamisa mashandiro anoita OpenSUSE.
verenga mhinduro dzangu pamusoro uye iwe uchawana mhinduro pasina kuwedzera ndangariro kumuchina wako
Yakanaka kwazvo posvo, ini ndakaisa SparkyLinux 4.2 Xfce i586 isiri-pae pc ine ASROCK P4i65GV kadhi uye Pentium IV 3GHZ RAM 1,5GB, uye chokwadi ndechekuti ndakashamiswa nekumhanya kweiyo distro yePolish mavambo uye huwandu yeapplication inouya isati yaiswa, yaive neKubuntu 14.04 yakaiswa uye iwe unogona kuona mutsauko neiyo Xfce desktop, iyi vhezheni iyo yainounza yakafanana zvikuru neWindows asi kune avo vedu vakaishandisa kwemakore iri mukana. Kuisirwa kwave kuri kwenguva yakareba asi zvave zvakakodzera kukamirira. Pakutanga kupinda mhenyu modhi iwe unofanirwa kupinda mukati: rarama uye pasiwedhi: rarama, icho chimiro chekuisirwa chandaisaziva. Pawebhu vanokurudzira zvikamu zviviri, imwe yekuchinjanisa uye imwe yeiyo system (/), asi pakupedzisira neGparted ndakaita 3, yekutanga yekuchinjisa kaviri RAM, yechipiri yeiyo midzi system / uye yechitatu ye / imba. Kana wapedza mune terminal inokubvunza zvakare kwaunoda kuisa bhutsu uye inokuudza kuti iwe unogona kuiisa mune ese, inokuratidza akati wandei ezvikamu, nekiyi space yandakasarudza / dev / sda sekuiswa mushure mekugadzira zvikamu, uye zvese zvakanaka, izvi zvinogona kuvhiringidza isu vedu vanobva kuUbuntu-based installations, mune iyo boot partition ndiyo yekutanga kuitirwa. Zvisinei ndakazvida zvakanyanya, ndinokoka munhu wese anoda kuzviedza.
Ndine urombo mune yangu yapfuura kutaura nezve SparkyLinux Ini ndaida kuti Grub hapana bhutsu, kuiisa mu / dev / sda, asi inogara ichiiswa mu / boot partition zvakadaro.
Yakanaka kwazvo posvo, ini ndakaisa SparkyLinux 4.2 Xfce i586 isiri-pae pc ine ASROCK P4i65GV kadhi uye Pentium IV 3GHZ RAM 1,5GB, uye chokwadi ndechekuti ndakashamiswa nekumhanya kweiyo distro yechiPolish mavambo ne linux 4.2.0 kernel .4.2.6 (14.04) uye huwandu hwezvishandiso zvaakatotanga kuisa, ini ndaive Kubuntu 3 yakaiswa uye mutsauko neXfce desktop unoonekwa, iyi vhezheni iyo inounza inotaridzika yakafanana neWindows asi yeavo isu takaishandisa kwemakore icho mukana. Kuisirwa kwave kuri kwenguva yakareba asi zvave zvakakodzera kukamirira. Pakutanga kupinda mhenyu modhi iwe unofanirwa kupinda mukati: rarama uye pasiwedhi: rarama, icho chimiro chekuisirwa chandaisaziva. Pawebhu vanokurudzira zvikamu zviviri, chimwe chekuchinjanisa uye chimwe chehurongwa (/), asi pakupedzisira neGparted ndakaita XNUMX, yekutanga yekuchinjisa kaviri RAM, yechipiri yeiyo midzi system / uye yechitatu ye / imba. Kana wapedza mune terminal inokubvunza zvakare kwaunoda kuisa iyo Grub uye inokuudza kuti iwe unogona kuiisa mune ese, inokuratidza dzinoverengeka dzezvikamu, nekiyi space yandakasarudza / dev / sda sekuiswa mushure mekugadzira zvikamu, uye zvese zvakanaka, izvi zvinogona kuvhiringidza isu vedu vanobva kuUbuntu-based installations, mune iyo iyo Grub yakaiswa muiyo boot partition, inova yekutanga kuitwa. Zvisinei ndakazvida zvakanyanya, ndinokoka munhu wese anoda kuzviedza.
sparkylinux. org / live-vashandisi-uye-mapassword /
Mario R. Fernandez akadaro
Pane chero munhu anoziva nezve chero distro ine chinongedzo nemifananidzo zvakafanana sezvinobvira WinXP? uye izvo zvakare hazvidi zvakawandisa zviwanikwa zvakaoma? Ndatenda…
Pindura kuna Mario R. Fernandez
Kune shamwari inobvunza distro yakafanana ne xp ini ndinokurudzira kana iwe uine muchina une 2gb yegondohwe cyberlinux inounza iwe maemulators ezvirongwa senge hofisi mune yayo vhezheni 1.2 penguins kana 1.3 pampa ikozvino kana uine gb
kubva pagondohwe ndinokurudzira famelix
Pindura kune masterconde
zano rinotendwa…. Ndichavaedza ... ndatenda
kuvhunduka jahua akadaro
Shamwari Ndiri kufarira kudzidza Linux. Ndinoda kuti mumwe munhu andipe zano reLinux rekubata mune in terminal kana koni modhi, uye kuti ini handidi kuisa (yakafanana neMSDOS 6.2), ini handifarire iyo Ubuntu giraidhi mode yakafanana neWindows. Iyo yakajairwa Linux, chinangwa changu ndechekuwana kuvaka / kubata maseva muLinux. Uye ndinokutendai.
Pindura kuna Shockjahua
haina mavhezheni e32-bit zvishandiso
Vakakanganwa SLAX inogona kumhanya ne 64Mb chete. RAM
Mary Martinez akadaro
Mhoroi, ndingafarire rubatsiro rweiyo Amd (atlon) X2 Dual core QL 2,1Gz uye 4 G yekumusoro, ini ndatora pasi yekutanga muna 32 uye 64 kuti ndiyedze, asi ndinoda maonero ako kuti ndedzipi dzeshanduro dziri kuburitswa pano kwaizondipa Mhedzisiro iri nani mukugadzikana uye zvishoma kuomarara kuti ndidzidze zvishoma nezvishoma, ini handina kumbobvira ndaisa linux asi ndanga ndichiwana mamwe mazwi akambonzwika seChinese kwandiri ..., windows ndakaedza ese maBhaibheri kusara gumi, ndokutenda zvikuru
Pindura kuna Mary Martinez
Mhoro, kune amdX2 mbiri musimboti Ql 84 uye Ram 4G, ndeipi iwe yaunokurudzira? Ini ndinobva w7 uye ndinoda kuchinjira kuLinux, ndatenda zvikuru
Mhoro Maria, kana iwe uchida system ine akawanda mashandisirwo uye utore mukana weiyo 4 magig egondohwe, mumaonero angu, ini ndaizosarudza LINUX MINT, uye kana iwe uchida kuita kwakanyanya kuita nekwakakodzera uye kwakakodzera kunyorera, ini ndinosarudza LUBUNTU
gentlemen kusava nechokwadi kwakati:
1.-iwe unofungei nezve OS isingaperi?
2.-ndine Dell vostro 1000 komputa ine semprom 3000plus 2.0 ghz processor ine 4 gb yegondohwe 128mb yevhidhiyo ine 1870mb inowanikwa ne1280 x 800 mhedzisiro, ndeipi system yaunokurudzira kuti ini handidi windows nekuti yaive ne default maonero?
Pindura kuna Gaznapiro
Ndibatsireiwo ndapota, ndine muchina unotsigira wakanyanya Win XP, uye iine 70% wifi yekuwana (200kbs) mune INFINITUM MOBILE kuwana iyo inosvika kumba kwangu unogona kuona zvakanaka Iwe chubhu pa360p; Asi ini ndakayedza neLinux mint 18 cinnamoon kubatana kwakaderedzwa kusvika 62% uye hakutakure chero peji neUsb wifi ine Realtek 8187l chip uye 24db Tplink grid antenna, ndiyo here iyo dhiraivha? yeLinux yekuita zvirinani nekadhi iri?
Rodrigo perezi akadaro
Edza Kuita http://www.reactos.orgPaYouTube unogona kuwana maitiro ekuiisa uye nekuishandisa uye kana uchiifarira, ipa kuti uenderere mberi nekuvandudza ino inoyevedza system.
Pindura kuna rodrigo perez
Autoresponder: Solution ndiregererewo vadikani veLinux, asi ini ndinokurudzira maReactoOs uye webhusaiti yepamutemo http://www.reactoros.org: Haisi Linux, ine windows xp mabhesi uye mashandisiro ayo ari pamutemo, tsvaga zvimwe paYouTube nezve maitiro ekuiisa, tarisa uye unoifarira.
Mhoroi, ini ndinowana kwandinogona kurodhaunira, unogona kundiudza, ndatenda
Pindura kuna pere
Yakanaka post shamwari, yakakwana kwazvo, ndinokukorokotedza. Mazhinji ema distros aya aisatomboaziva, ini ndichaedza akati wandei kuve nawo izvo zvinondisimbisa kutsiva mudiwa wangu (asi asisiri kutsigirwa) kuhwina xp. Kwaziso kubva kuArgentina.
Mhoroi vanhu vese!
Ndiri kufarira kubvongodza nekumutsiridza zvigadzirwa zvekare uye parizvino ndine akati wandei mashini anoshanda (K6-2, P-III, K7, Duron neAthlon, P-4, nezvimwewo). Mune ese mavo ini ndakaisa vhezheni yeLinux pamwe neWindows.
Dambudziko randiinaro nePC ine K6-2 400 mhz uye 384 mb gondohwe, sezvo ndisati ndawana mashoma emasaiti anondishandira neLinux, nekuti iyo K6-2, kusiyana neP-II yazvino ino processor. izvo hazvitsigire iyo CMOV kuraira, saka hazviite kuti ini ndiise distros ine kernel yakakwirira kupfuura 2.4. Parizvino ini ndangokwanisa chete kuisa yechinyakare vhezheni yeDamn Small (ini ndaisazvida zvachose), Guadalinex uye imwe yeK-demar.
Ndinoda kuramba ndichiedza mamwe ma distros pakombuta iyi. Mumwe munhu aigona kundiudza kana paine zviripo? Kana kana paine hunyengeri hwekuisa imwe yemazuva ano?
Mhoro, shamwari hombe, chinyorwa, munhu wese ari pamusoro, ini ndaida kukubvunza kuti ndeupi waungakurudzira wepakati 2 duo yegumi gondohwe
Yakanyanya kunaka rondedzero, ivo vanofanirwa kuwedzera SolusOS iyo yakanaka kwazvo! Chiedza uye chakanaka
Ndokumbirawo ndeipi linux ndiyo yakanakisa kana yakakodzera kwazvo kune dell i5 6gb ram 350 hd laptop?
Kune iyi mhando yelaptop (ini ndine dell i5 asi ine 4GB ye RAM) ndakavhuraSUSE yakaiswa. Iyo Leap 42.1 vhezheni. Inoshanda chaizvo, yakagadzikana uye iri nyore kushandisa.
Alexander Arancibia akadaro
Yakanaka post. Kuenzanisa kwako kwakarurama chaizvo. Ndatenda!
Pindura kuna Alejandro Arancibia
Mhoroi, kungotenda vese vanhu avo vanopa ruzivo rwavo kuti vabatsire vamwe vasina kumirira kuti vadzokere kwete zvinopfuura "ndatenda". Ndiwo mweya wepenguin uye weavo vedu vanonzwisisa kuvaka magariro kubva pakatwasuka. Ini ndaonekwa pano ndichitsvaga maitiro ekupa hupenyu kune yangu yekare acer shuva imwe ine n450 processor ine 1 gb. Kubva pane zvese zvinoonekwa mune ino nemamwe mapeji ini ndichafunga pakati pe manjaro, linux lite, open suse uye debian. Hutano nekubudirira
Pindura kune izvo
Ndatove ndashandisa lubuntu kwenguva yakati, chokwadi ndechekuti inoshanda mushe pabhuku rangu rakanyatsonaka Intel atom 1.66ghz
2gbt ram 500hd, ini ndakagonesa xcommgr (mwenje desktop madhivhisheni) izvi zvakanakisa uye zvakakurudzirwa kune yakanaka pc, kwaziso kune vese!
Pindura kuna lcanonacar
Linux min mate uye pasita tsvene.
Uye iyo distro inoshanda zvakanyanya paOld Pcs ndeye Debian LXDE, pasina kupokana, mushure mekuyedza anopfuura makumi mashanu ma distros.
Josh Villa akadaro
Uye ndeupi anoita seari nani kwauri?
Pindura Josis Villa
Kubvumirana kwazvo newe, Fede; Ini ndichangobva kuiisa pane AMD Duron 1300 ine 512mb ram uye inoshanda kwazvo. Izvo chete zvinonetsa neyakare Hardware zvinopihwa newebhu mabhurawuza, nekuti mazhinji haashande nemakrofoni pasina SSE2, asi kugara uchitsvaga mhinduro kunowanikwa.
Mhoroi munhu wese! Ndakaedza akawanda masisitimu anoshanda pamakomputa ekare uye iyo yakashanda zvakanyanya yaive ELIVE! Iye zvino ndinayo seop system. mukuru mune beta vhezheni….
Pindura kuna jhon
Mor gealo akadaro
Uye ikozvino iko kupera kwe32-bit kugoverwa kwaziviswa, ndedzipi sarudzo dzeLinux dzatakasiira, semuenzaniso, iyo Pentium IVs?
Ndinokutendai mose zvikuru nemipiro yenyu.
Pindura Mor Gealo
Ini handifunge kuti ese 32-bit distros achazonyangarika, ichokwadi kuti mazhinji acho ari kungoburitsa makumi matanhatu neshanu zvigadziriso, asi handifunge kuti pachave nevashoma vanoshayikwa vanoramba vachipa hupenyu kumamic mikes. Chokwadi, imwe yemabhenefiti makuru eLinux kugona kwayo kudzokorora michina yekare.
Kune zvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux, imwe neimwe ichirova kupfuura iyo imwe nekuda kwenzvimbo dzayo senge openuse, yekutanga os, pakati pevamwe .. dambudziko riri mune mazhinji acho havana rutsigiro rwekubatsira kana chikanganiso chaonekwa, pane zvakanyanya rubatsiro rudiki rwunowanikwa .. kune Kune rimwe divi, kunogara kuine rutsigiro rwehunhu uye zvigadzirwa zvaro .. izvo parizvino zvirinani kuisa distro kubva kubuntu pane kuisa iyo imwechete ubuntu (iri kudya zviwanikwa zvakawanda ini funga kuti iri kuita kukwikwidza kumahwindo) .. pakupedzisira ini ndinoona kuti zvirinani kuisa linux distro ine ruzivo rwakawanda uye kubatsira rutsigiro ..
gore rega rega ivo vanoburitsa distro nyowani uye vanhu vanotanga kukurudzira pasina kutora zvakakosha, senge nharaunda inovatsigira, makore avakange vachishanda, kugadzirisa, nezvimwe; Mazhinji emapurojekiti haashande kana nekuti ivo vanowanzo kukanda zvikanganiso zvakawanda, zvimwe zvinongoedza uye vamwe vanomira kuchengetedzwa uye vanosiiwa nevakagadziri vakafanana vakamirira forogo iyo inogona kunge iine kwainoenda. Kubva pane ruzivo ndinokurudzira maviri ezvese: Arch linux kana iwe uine ruzivo uye uchigona kubata yako yega kugovera kubva kunyaradzo, pamusoro pekugadzirisa iyo AUR pazvinenge zvakakodzera (zvakaitika kwandiri kamwechete pasvondo mushure mePHP 2 yakaburitswa, script yakaita Haishande uye waifanirwa kuchinjisa, iyo yaida yepakati-yepamusoro nhanho mu bash), ine nharaunda yakakura yekutarisana nekukanganisa kupi, yakanyatsogadzikana uye kupeta-realease. Zve newbies ini ndinokurudzira Ubuntu, kana iri inorema, lubuntu inzira yakanaka kwazvo uye matambudziko mune izvi anogona kugadziriswa kubva ku forum ye ubuntu, mamwe ese ma distros angave akaomesesa (DEBIAN) kana iwe unofanirwa kudzidza mamaneja matsva uye vamwe vakaita seRPM yered red hat / fedora / open suse. Asi iyo yakanakisa hunyanzvi yekudzidza zvese zvakanyatso ndinofunga ichave Arch-linux, avo vanoda kudzidza zvakanaka havazozvidemba pavanozvisarudza
Ndine powwerbook g4 ine 512 ram, ndeipi system yaunokurudzira iyo inogona kumhanya mushe
Mhoroi munhu wese, ndine HP Mini 1000 kabhuku uye zvinosuwisa kuti ndiri kushandisa windows xp ... Sy zvishoma zvishoma pane mudzidzi mune ino mahara software uye ndinonyatsoda rutsigiro kuti ndizive OS yandinogona kuisa
Zvekureva kwako, ini ndichakuudza kuti ndinoshandisa Dell Dimension 5000 desktop, ine Intel Pentium 4, 320 Ghz x1 CPU, 3 Gb RAM, 1 Tb HDD uye neNVIDIA NV41 kadhi (Geforce 6800). Iyo inoshanda sisitimu ndeyeLinux-Mint 18.1 Cinnamon 32 mabiti. Ini ndinoshandisa vhidhiyo uye odhiyo edhisheni zvirongwa (Openshot, Audio converter, nezvimwewo), uye zviri chaizvo nemifananidzo iyo ini ndinowanzove nezvinetso, ndokuti: iyo komputa inotonhora uye ini ndinofanirwa kuidzima ndoitazve.
Ini ndinoshandisa zvakare ACER Travelmate 6460 laptop, yakatengwa muna2004 kana ndisina kukanganisa, izvo izvozvi ini handina maficha ayo. Ini zvakare ndinoshandisa Linux-Mint 18.1 Cinnamon, chete 64-bit. Ini ndine angangoita mapurogiramu akafanana akaiswa uye, kunyange zvazvo dzimwe nguva yakadonha, hazvisi zvakajairwa.
Atahualpa Diaz akadaro
Mhoroi vanhu vese, ini ndine HP Mini 1000 uye handizive kuti OS ndeipi yakanakisa, chokwadi ndechekuti ini handizive chero chinhu nezve software yemahara, ko kana ndikaziva ndechekuti mahwindo ane muchina wangu anorema uye anotora kukwira yakawanda nzvimbo, uye ini ndoda kushandisa yemahara software. Pane mumwe munhu anganditungamira pane izvi ndapota? Ndotenda zvikuru.
Pindura Atahualpa Diaz
Ndanga ndichishandisa manjaro mune akati wandei. Netbook ine mhedzisiro yakanaka kwazvo, pane rutsigiro rwemakumi matatu nematanhatu uye kana bine isiri iyo inobata zvishoma zviwanikwa, zvinofamba zvakanaka nemhando iyi yemabhuku.
Pindura kuna Everdi
Mhoroi, ini ndoda rubatsiro, ndeupi waunokurudzira kuisa iyo So.? have….
Pentiun 4 ine maviri 2,8Gh cores uye imwe ine 1 2,6Hz nucleus ine 4 Ram uye maviri Ram zvakateerana kana vari michina miviri yekare, zvese kubva kuIntel uye 32 Bits, inoda: kufambisa internet, masocial network, ona Mafirimu ane vga ari 256 na512, ini ndinoshandisa sdd 256 - Ddd 2tr uye imwe chete Hdd 2tr zvichiteerana, shandisa: jdowloder, Msoft (Wo.Ex.etc), Open Office, zvakare inotsigira yekare 815c hp printer…. ndiko kumisikidzwa kunoda imwe data kana kuti zvakwana? Ndatenda pamberi pezvenguva yako yekuzvitsaurira.
ndingawane kupi madhiraivha ezvimwe zvinongedzo?
David Hernandez akadaro
antiX ndeyangu yakanakisa, yakanyatsorongedzwa, yakasimba, yakajeka, haigumi anopfuura ma-megabyte makumi mapfumbamwe uye tob kuti ikwane, bhurawuza, firefox inoenda nekukurumidza uye kune zvimwe zvinhu zvakaiswa haina kuremerwa uye kunonoka ndiko kwakanyanya kwakaedzwa
Pindura kuna david hernandez
Emerson gonzalez akadaro
Tichifunga nezvekuti Linux inoshanda zvishoma kupfuura kunyora tsamba kana maemail, ini ndinoshandisa iyo kufamba ndisingatyi vabrowser vanobvuta uye izvo zvisina basa
Kwandiri chakanyanya kunaka muchiedza iyo Puppy Thar, chengetedza kana iwe uchida mufaira, vadzivirire uye chero chawakagadzirisa, uye kunyangwe zvichitora nguva kutanga nekuti inoteedzera mafaera ayo kugondohwe, kana ichangotanga inoenda zvakanaka kwazvo mu 64 bits
Iwe hausi kuzogadzirisa vhidhiyo kana kurira neizvi, asi sezvo iwe usingakwanise kuzviita neimwe yeiyo "inorema", hazvina basa
Kune avo vanotanga ini ndinokurudzira, usatambise makore uchifamba uchitenderera mugoogle, yakajeka kwazvo distro uye unomhanya
Pamwe rimwe zuva Linux ichave iri windows kana mac iri, asi izvo hazvizoonekwa nemeso angu, ... kana zvako
Pindura Emerson Gonzalez
Emerson, ine ndima yako yekutanga iwe unoratidza kusaziva kwako kukuru nezveLinux. Asi kusaziva kunotyisa kwazvo.
Ini handisi kuzokunetsa kukupa iwe mienzaniso yehunyanzvi Linux inoshandisa nekuti haina kukosha, asi kana iwe ukatsoropodza yemahara software, zviite kubva paruzivo, kwete chako chakakosha chiitiko.
Mangwani akanaka. Pasina kukurudzira kukakavara kusingabatsiri, ndinofanira kuudza Emerson kuti Windows XP Professional, 7 kana 10 Ekupedzisira, ese 64-bit, akarembedza kwandiri achiedza kugadzirisa mavhidhiyo. Uye ndinofanira kuudza Rafael kuti kubva pamaonero emunhu asingabate Chirungu zvakanaka, achimhanya zvirongwa muLinux -zvino ini ndinoshandisa Linux Mint uye pamberi peUbuntu- idambudziko (semuenzaniso, kubatana kweWiFi kana kuita kuti fax ishande kana kushandisa iyo yemagetsi DNI). Ehezve, nekuda kweLinux ndichiri kushandisa macomputer andingadai ndaifanira kurasa neWindows: Dell Dimension 5000 desktop ine 3 Gb ye RAM uye 4-bit Intel Pentium 32; uye Acer TravelMate 6460, zvakare iine 3 Gb ye RAM, Intel Core 2, 64-bit. Ngatiregei kuva vanokundikana kana vanonyumwira kudaro: kuna Kesari zviri zvaKesari. Kwazisai vese uye nekutenda kwangu nekutibatsira.
Ndatenda zvikuru nezano renyu.
Ini ndiri mutsva kuLinux uye ndinoona kuti kune OS isingaperi.
Chinoreruka pane zvese zvandakaedza uyezve kwave nemazana, pamaPC akasiyana uye netbook ndeyeKolibriOS, iri diki diki kusvika kune yakanyanya kunyatso chenjera uye inonzwisisika, kuti kana iine zvayakaipira, zvakaoma kuisa novice vashandisi Ine mapurogiramu ayo kureva kuti hapana zvakawanda zvakasiyana semamwe ma distros izvozvi maererano nekuita mu PIII kubva pakatanga bhatani rekutanga kusvikira sisitimu yazara, zvakatora 9 masekondi.
Uye kana uchifarira pamusoro, siya posvo yandave ndichiita nemaPC akasiyana uye nemabhuku emari epasi, ndinovimba zvichakubatsira
Kwaziso kubva kuVzla. Ndakaverenga uye ndikaverenga zvakatumirwa uye zvakataurwa asi zviri kutovhiringidza. Ndine urombo nekusaziva kwangu pamusoro penyaya asi ndinoda rubatsiro rudiki.
Ini ndoda "kumutsa" iyo Sony Vaio PCG-GR370 ine magadzirirwo kana hunhu huri:
• Nhare yeIntelPentium
• CD-RW / DVD combo
Yakabatanidzwa 10/100 Base-T Ethernet
Pentium III 1.13GHz processor
RADEON -D mifananidzo chip
Inzwi system inoenderana ne 3D yakatenderedza
Ndangariro yekunamatira midhiya
TV kunze, USB (3), RJ-11
Ndeipi linux system yaungakurudzira? Izvo zvinoshanda kune zvekutanga + Internet + Yemagariro Networks.
ubuntu 16.04 yakagadzikana uye vergataria inowedzera cairo dock
Pindura kune anokudzwa
Chema Gomez akadaro
Sekuziva kwangu, ElementaryOS yatove inongowanikwa mu64bits. Changu chandinoda pane iwo akareruka, Lubuntu. Iyo yakashata pakutanga, asi iine mashoma tweaks inoenda yakasarudzika uye inotaridzika chaizvo inotonhorera.
Pindura Chema Gómez
Chinyorwa chakanakisa uye tambo yekutaura inonakidza kwazvo. Ini ndaida kuuya kuzokutendai nerubatsiro, mave muchindibatsira kwazvo :)
Ini ndoda kutaura zvakanakisa, zvirinani kwandiri, ndatoedza zvese izvo uye ndinogara neMX Linux
Ndine Sony VAIO VGN-FE28B laptop uye ndakakanganisa kusimudzira kuti Windows 10.
Ini ndinoti iko kukanganisa nekuti kubva panguva iyoyo komputa yanga ichinonoka, kutanga, kudzima, kufambisa mafaera, nezvimwe. Nematambudziko mazhinji ekubatanidza kune internet kuburikidza neiyo imba yeWiFi.
Ndakaedza kudzokera kuWindows 7 asi ndakawana meseji yekuti Windows 10 yakanga yatoiswa kwechinguva uye haina kukwanisa kudzokera ku7
Mumwe wandaishanda naye akandiudza kuti kazhinji michina yekare iyi inoenda zvirinani neLinux yemahara software yekugovera
Handisati ndamboshandisa masisitimu anoshanda.
Ndakaverenga zvishoma uye zvinoita kunge vanhu vari kuenda kuLubuntu kana Elementary OS.
Ruzivo rwandakawana nezve hunhu hwebhuku rekunyorera ndeinotevera.
Makumi matatu nematatu. 32Gb RAM (pakutanga 2 yakawedzerwa kusvika 1). Yechokwadi INTEL CPU T2 2300GHz processor
Nemaitiro aya, ndeupi kugoverwa kweLinux iwe kwaunokurudzira?
Pindura kune lsgrcgrc@gmail.com
Kune avo vawakatumidza ini ndinokuudza kuti Lubuntu, Elementary OS haichatsigire makumi matatu nematatu.
Ini pachangu ndiri kushandisa lubuntu uye zvinoshamisa.
ROMUALDO García Hernandez akadaro
Mangwanani, pakutanga nekombuta yakafanana neiya iwe yaunotsanangura, ini ndakaisa Lubuntu, asi haina kuburitsa YouTube, ipapo ini ndakaisa Zorin, asi yakanga isina flash player rutsigiro, mamwe mapeji emitambo haana kuratidza, mushure meizvozvo ini ndakaisa Ubuntu, Inorema kwazvo kuchikwata changu, kudzamara ndaisa Mint, uye inoshanda kwazvo, yakafanana kana kuti yakafanana neWindows 7, kana iwe uri mutsva kuLinux, ndinokurudzira Mint, zvinokufadza.
Pindura kuna ROMUALDO GARCIA HERNANDEZ
Ini ndinoshandisa izvozvi porteus yakanaka kwazvo ini ndinoziva ruzha uye netiweki, zvakare slax 6, 7 kana 9, zvakare puppy xslacko mwenje wakazara kwazvo unogona kumhanyisa kubva kuUSB kana kuiswa nenzira isingabatsiri ne grub4dos pane hard disk.
Ini ndawana yangu yekare laptop, ine Xubuntu yakaiswa uye iyo yandakagadzirisa.
Asi ini ndoda kuisa Chromium uye ini handizive, kana hazvindibvumidze,
Ndine 1 GB RAM uye 100 GB dd
Ndeipi distro iwe yaunoziva?
Mhoro munhu wese, ndanga ndichishandisa Linux mune akati wandei distro kwenguva yakati, ini ndinobva kuhunyanzvi hwekutsigira uye nerudzi urwu rwe software ndakakwanisa kuita zvinhu zvakawanda, senge kudzoreredza ruzivo, mafaera faira, proxy nezvimwe ... uye chinyorwa ichi inoita kunge yakanakisa .. .. Kunyange ichivarwadza kana chiri chisimba chisimba kuchengetedza ruzivo Linux ndiyo yakanakisa …… Venezuela ………… ..
Pindura kuna willie
Mazhinji ekugoverwa ataurwa pano zvakanyanya anoda ZVIMWE kupfuura 64 MB yegondohwe, hazvishande kune iyo laptop iyo yandinoda kumutsidzira, muchidimbu, zvirinani nditarise maitiro ekuisa pendrive neefFat fomati muRedhat 8 (semuenzaniso ) iyo yakaiswa mushe uye inoshanda mwenje Kune zvandiri kuda iyo laptop (ona JPG mifananidzo yakanyanya kundikwanira) sezvo tichiishandisa mumusangano uye tinayo chete kune izvo uye neWindows XP inoenda kunge dhongi rekare
ndatenda nepfupiso! iyo yakandishandira yaive Peppermint Os. ine madhiraivha anodikanwa ekuisa kabhuku kane Intel Atom
Ini ndichasiya ruzivo rwangu kuitira kana zvichibatsira kune mumwe munhu.
Ini ndaida kukwanisa kushandisa pc kubva 2005 uye yaingova neCD uye yakanga isina DVD ...
Nechipi cheizvi sarudzo chaive chakawedzera kana kushoma hafu ... Lubuntu naKubuntu hazvigoneke, ndinofunga graphical kukanganisa.
Pakupedzisira Pupi Linux uye Antix.
NaPupi linux zvese zvaive zvisiri munzvimbo ... mamenu ekunyaradza, zvese zvakasiyana zvakanyanya .... uye kunyanya dambudziko neGrub04 yandisingakwanise kugadzirisa.
NaAntix PEKUTANGA uye zvinoenda sepfuti !! kushamisika kwakanaka kwazvo.
Zvese zvandinoda zvinobva ku "" fekitori "" uye yakajairwa koni mirairo, kune hobbyists seni.
Kutenda neichi chinonyanya kubatsira posvo.
Kuburitswa kukuru kwemwenje linux anoshanda masystem emakomputa ekare, ini parizvino ndinoshandisa Fedora LXDE, chinhu chakashata ndechekuti haina aesthetic interface.
Asi kune vamwe vese ndinomuda zvakanyanya.
Jesu MFV akadaro
Bro ndine mini laptop ine intel atom 1.60ghz 32 bits uye 1gb ram, iyo yaunondikurudzira kuti ndikurumidze, shande uye nemhando yakanaka uye kuti ndinogona kuramba ndichiita zvinhu senge mumawindows 7
Pindura kuna Jesu MFV
Vanoverengeka vakatomisa 32-bit rutsigiro, zvinodikanwa kuti uvandudze.
inoita 5 mazuva
Ndine makore 82 ekuberekwa uye ndiri kunetseka nekutanga lenovo yandakapiwa nehurumende, ndakaisa Huayra 3.2, netbook ine intel atomu ine 1 single core, 1,6 Gb. 32 bits of ram 2gb uye haindibvumire gadziridza mozilla firefox kana chero imwe chirongwa kana kudhawunirodha imwe. I had windows 7 but ndakawana microsof poster haichina support ndosaka ndakaisa huayra ine interface yandinoda but ndoisa imwe. Ndatenda